Shirka qorshaha cusub ee Afganistaan - BBC News Somali
Shirka qorshaha cusub ee Afganistaan
Image caption Madaxweynaha Afganistan Hamid Karzai iyo HillaryClinton
Wasiirada arimaha dibada ee Afartan wadan ayaa ku shiraya magaalo madaxda Afganistan ee Kabul.
Shirka ayaa loogu tala galay in lagu saxiixo heshiis qorshe cusub ee ay Dowlada Afganistaan ku shaqaynayso.
Afganistaan ayaa waxay heshay ilaa hada 36 billion oo dollar oo gar gaar ah ilaa 2001 dii laakiin saamayn yar aay ku yeelatay dalka.
Lacagta inteeda badan waxaa lagu qarash gareeyay amaanka taasoo uu ugu uyeeray Bangiga Aduunka, shaqaalaha ugu lacag badan ee ajbnabiga ee ku shaqeeya inay talo bixiyaan dalka Afganistaan.
Warbixino badan oo dhaleecaynaya lacagta gargaarka ee la siiyo Afganistaan ayuu soo saaray Bangiga Aduunka ilaa 2001dii, wuxuu ku eedeeyay waddamadda deeqda bixiya inay san wax badan ka qaban inay xoojiyaan awooda dowladda Afganistaan.
Hadda shirka Kabul ka socda ayaa ujeedadiisu tahay in la kordhiyo lacagta gargaarka ee toos loo siiyo dowlada Afganistaan 20 ilaa 50 boqolkiiba.
Laakiin Maraykanka ayaa ka walaacsan lacagta toos loo siinayo dowlada Afganistaan, kadib markii ay soo baxday in guryo waawayn looga dhistay Dubai lacagtii gar gaarka.
Laakiin soo noqoshada wasiirkii hore ee maaliyada ee afganistaan Ashraf Ghani oo wax ka qoray qorshahan cusub ee dowladda afganistaan, ayaa laga yaabaa in maraykanka uu ku qanco.
Ashraf Ghani ayaa ahaa wasiirkii hore ee maaliyada markii Talebaanka xukunka laga riday, reer galbeedkana nin fiican ayay u arkaan, inkastoo ay isku xumaadeen madaxweynaha Afganistaan Hamid Karzai sanadihii danbe.
Dowladda Britain ayaa gargaarka uu siiyo Afganistaan intiisa badan wuxuu toos u siiyaa Dowladda Afgaistaan.
Dowladda Britain waxay ku dhawaaqday inay kordhinayso gargaarka ay siiso Afhganistaan 40 boqolkiiba.